Vaovao - Fampirantiana momba ny sakafo iraisam-pirenena ho an'ny Russia faha-22 2019
Nandray anjara tamin'ny fampirantiana ny Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd, izay mampiseho ny fivarotana vokatra tsara indrindra sy ny sarin'ny orinasa. Amin'ny maha-tsenan'ny agara sy carrageenan lehibe kokoa ny fanjifana azy, dia fanindroany nampahafantatra ny tenanay tamin'ireo mpanjifa Rosiana. Izahay dia nanondrana ny agar ho any Russia sy Ukranie, ny fahombiazana lehibe dia ny fahazoana fiaraha-miasa fizarana manokana amin'ireo mpanjifanay Rosiana sy Ukraina.
Fotoana fampirantiana: 19-22 Febroary, 2019
Toerana fampirantiana: Mosko, Rosia
Vokatra fampirantiana: Agar & Carrageenan
Ingredients Russia Exhibition (FIR) dia natolotry ny ITE Group PLC any Angletera. Ny fampirantiana natao hatramin'ny taona 1998, taorian'ny 20 taona namboarana ny rotsakorana, ny fampirantiana dia nanjary nanan-kery indrindra tany Russia, ny hany fampidirana sakafo sy fampirantiana matihanina, taratra manerana ny tany firaisana Sovietika teo aloha, minisiteran'ny fambolena any Russia, ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny varotra Rosiana, ny fanohanan'ny andrimpanjakana ofisialy federasiona Rosiana toy ny mpamokatra additives sakafo.
Nandritra ny taona maro, ny sakafo dia entam-barotra nentim-paharazana fanafarana entana tany Rosia, kaonty ho an'ny 1/4 amin'ny total import, laharana faharoa ho an'ny milina sy ny fitaovana ary ny fitaovam-pitaterana (mitentina eo amin'ny 35% amin'ny total import) amin'ny sokajy rehetra entam-barotra avy any ivelany. Ny vahoaka rosiana dia miantehitra betsaka amin'ny sakafo ampidirina amin'ny fiainana andavanandro. Amin'izao fotoana izao, ny fahafahan'ny famokarana indostrialy famokarana sakafo an-trano any Rosia dia latsaky ny 50% amin'ny filan'ny fiainam-pirenena, ary manodidina ny 90% ny enti-miampy amin'ny tsena nohafarana avy any ivelany. Rosiana dia voaporofo fa tsena tena manintona ho an'ireo orinasa mpamokatra sakafo. Amin'ny maha mpanondrana sakafo, akora sakafo ary additives lehibe azy, dia manana tombony lehibe i Shina amin'ny lafiny vidiny amin'i Russia, ary ny volan'ny varotra dia mitombo isan-taona. Manokana, ny proteinina legioma, proteinina soja, stevia, legioma tsy ampy rano ary vokatra hafa dia raisin'ireo mpivarotra ambongadiny rosiana.
● Siramamy sy syrup
● Vokatra namboarina sy tsindrin-tsakafo
● Ny tavy, solon'ny tavy ary menaka azo hanina
● Sauce sy condiment
● Fanahy, liaka sy divay
● Vokatra soja
● Voankazo, legioma ary voanjo
● Kolontsaina vao manomboka
● Fanahy, toaka ary divay
● Mpamatsy tolotra mifandraika amin'izany
● Kôlôida sy zana-kazo
● vokatra semi-vita